တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ကိုကိုးကြှနျးမွို့နယျရှိ၊ နယျမွခေံရတေပျစခနျးသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုစဈဆေး၊ ရပျမိရပျဖမြားနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြားအား တှဆေုံ့အမှာစကားပွောကွား » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နပွေညျတျော၊ ဇူလိုငျ – ၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ညှနျ့ဝငျးဆှနှေငျ့ တာဝနျရှိသူမြားလိုကျပါပွီး ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ကိုကိုးကြှနျးမွို့နယျရှိ နယျမွခေံရတေပျ စခနျးသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုစဈဆေးပွီး ရပျမိရပျဖမြားနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြားအား မွို့နယျခနျးမ၌ တှဆေုံ့အမှာစကားပွောကွားသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအား နယျမွခေံရတေပျစခနျးဌာနခြုပျမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားက ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။ ယငျးနောကျ နယျမွခေံရတေပျစခနျး အစညျးအဝေးခနျးမတှငျ ရတေပျစခနျးမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက နယျမွဒေသေဆိုငျရာ အခကျြအလကျမြား၊ နယျမွဒေသေလုံခွုံရေး လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျထားရှိမှုအခွအေနမြေားနှငျ့ သဘာဝသယံဇာတအရငျးအမွဈမြား ထိနျးသိမျးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ကိုကိုးကြှနျးမွို့နေ ဒသေခံပွညျသူ မြားအား တပျမတျောမှ လယောဉျ၊ ရယောဉျမြားဖွငျ့ အပတျစဉျ/လစဉျ အခမဲ့ပို့ဆောငျ ပေးနမှေု အခွအေနမြေား၊ တပျပိုငျစိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျထားရှိမှုနှငျ့ ထှကျရှိလာသညျ့ အသားငါး၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားအား တပျမိသားစုဝငျမြားနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြား၊ ဋ်ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးမြားအား သကျသာသောဈေးနှုနျးဖွငျ့ရောငျးခြ ပေးနမှေု အခွအေနမြေား၊ အုနျးနှငျ့ အုနျးထှကျပစ်စညျးလုပျငနျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားနှငျ့ ကိုကိုးကြှနျးဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျနမှေု အခွေ အနမြေားကို ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။
ရှငျးလငျးတငျပွမှုမြားအပျေါ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ကိုကိုးကြှနျးဒသေသညျ အလှမျးကှာဝေးသောဒသေဖွဈ၍ စားသောကျရေး၊ နထေိုငျရေး အခကျအခဲမြား ရှိနိုငျကွောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ တပျပိုငျစိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျးမြားမှထှကျရှိ လာသညျ့ အသား၊ ငါး၊ ကွကျဥ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားအား ဒသေခံပွညျသူမြားအား သကျသာသောဈေးဖွငျ့ ရောငျးခပြေးပွီး သကျသာခြောငျခြိရေးဆောငျရှကျပေးမှုမြား အပွငျ ဒသေခံမြား၏ လူမှု စီးပှားဘဝဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျစရေေးအတှကျ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြားကို ဆောငျရှကျပေးရမညျ ဖွဈကွောငျး၊ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေး လုပျငနျးမြားမှ ထှကျကုနျမြားကို အထားခံသညျ့ ကုနျခွောကျ လုပျငနျးအဖွဈ တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျ ရမညျဖွဈကွောငျး၊ အုနျးနှငျ့ အုနျးထှကျပစ်စညျးမြားကို ဒသေ၏ အဓိကထှကျကုနျအဖွဈ ဆောငျရှကျနိုငျရမညျဖွဈကွောငျး၊ ကာကှယျရေးပိုငျးတှငျလညျး ရှတေ့နျးကကြ အကာအကှယျပေးနိုငျသညျ့ ရတေပျစခနျးဖွဈသဖွငျ့ ပွညျစုံ အောငျဆောငျရှကျကွ ရမညျဖွဈကွောငျး၊ တပျမတျော၊ ဋ်ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးမြားနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြားအားလုံး တဈသားတညျးဖွငျ့ ဒသေဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ သှားလာရေးအဆငျပွအေောငျ အတတျနိုငျဆုံး ဆောငျရှကျပေးရမညျဖွဈကွောငျးဖွငျ့ မှာကွားသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ နယျမွခေံ ရတေပျစခနျးအတှငျး မျောတျောယာဉျမြားဖွငျ့ လှညျ့လညျ၍ ကိုကိုးကြှနျး လယောဉျကှငျး၊ လယောဉျပွေးလမျးတိုးခြဲ့ ဆောငျရှကျနမှေုလုပျငနျး၊ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျး ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ တပျတညျဆောကျရေးလုပျငနျး ဆောငျရှကျထားရှိမှု အခွအေနမြေားအား လိုကျလံ ကွညျ့ရှုရာ တာဝနျရှိသူမြားက လိုကျလံရှငျးလငျးပွသ ကွသညျ။ ရှငျးလငျး တငျပွမှုမြားအပျေါ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက လိုအပျ သညျမြား ညှိနှိုငျးဆှေးနှေး မှာကွားခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ မှနျးလှဲ ပိုငျးတှငျ ကိုကိုးကြှနျး မွို့နယျရှိ ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးမြား၊ ရပျမိရပျဖမြားနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြားအား မွို့နယျခနျးမ ၌ တှဆေုံ့၍ စားသောကျဖှယျရာပစ်စညျးမြားနှငျ့ ထောကျပံ့ရေးပစ်စညျးမြားကို ထောကျပံ့ ပေးအပျရာ မွို့နယျအထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူး ဒျေါမိုးမိုးအေးနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားက ကွိုဆို နှုတျဆကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာ၌ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးဆိုငျရာ မြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွောကွားရာတှငျ ယခုကဲ့သို့ ထပျမံတှဆေုံ့ရသညျ့အတှကျ ဝမျးမွောကျမိပါကွောငျးနှငျ့ ကိုကိုးကြှနျးသို့ မိမိရောကျရှိသညျမှာ ယခုအကွိမျသညျ ၁၆ ကွိမျမွောကျ ရောကျရှိခွငျးဖွဈပါကွောငျး၊ ပထမဆုံးအကွိမျ ရောကျရှိကတညျးကပငျ ကိုကိုးကြှနျးဒသေ၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ကူညီဆောငျရှကျ၍ တိုးတကျ စရေေး ပွုပွငျပွောငျးလဲပေးသှားမညျဟုပွောကွားခဲ့ပွီး တပျတညျဆောကျရေးလုပျငနျးမြား အပွငျ မွို့တညျဆောကျရေးလုပျငနျးမြားကိုလညျး တတျအားသရှေ့ ဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါ ကွောငျး၊ မွို့အတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျသညျ့ ဆိပျကမျးတဈခုကိုလညျး တညျဆောကျ ပေးခဲ့ပါကွောငျး၊ ပထမဆုံးအကွိမျရောကျရှိစဉျ က လယောဉျပငျခကျခကျခဲခဲ ဆငျးသကျ ခဲ့ရပွီး ယခုအခြိနျတှငျ လယောဉျကှငျးအား အဆငျ့မွှငျ့တငျပေးခဲ့သဖွငျ့ ဂကျြလယောဉျမြား ပငျဆငျးသကျနိုငျပွီဖွဈကွောငျး။
ပထမဆုံးအကွိမျရောကျရှိစဉျက လလေ့ာစဉျ အုနျးပငျအမွောကျအမွားရှိသဖွငျ့ အုနျးနှငျ့ အုနျးထှကျပစ်စညျးမြားကို ထုတျကုနျအဖွဈ ထုတျလုပျနိုငျရမညျဖွဈပွီး အုနျးထှကျ ပစ်စညျးမြားကို ကိုကိုးကြှနျး၏ အဓိကထှကျကုနျအဖွဈ ထုတျလုပျနိုငျရမညျဖွဈကွောငျး၊ ယခုလကျရှိထုတျလုပျနသေညျ့ အုနျးဆီ၊ အုနျးဆံကွိုး၊ အုနျး အလှဆငျပစ်စညျးနှငျ့ အိမျသုံးပစ်စညျး ထုတျလုပျမှုမြားအပွငျ အုနျးမီးသှေး၊ အုနျးခှံဓာတျမွသွေဇာ မြားကိုလညျး ထပျမံထုတျလုပျနိုငျရေး ဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈကွောငျး၊ အဆိုပါ အုနျးနှငျ့အုနျးထှကျ ပစ်စညျးစကျရုံကိုလညျး ဒသေခံပွညျသူမြား အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးရရှိစရေေး ဆောငျရှကျပေးရမညျဖွဈကွောငျး၊
လူတိုငျးကွီးပှားတိုးတကျလိုကွပွီး ထိုသို့ ကွီးပှားတိုးတကျရေးအတှကျ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြားရှိရမညျဖွဈကွောငျး၊ လုပျနိုငျသညျ့စှမျးရညျ လူသား စှမျးရညျလညျး လိုအပျသဖွငျ့ အတနျးပညာ၊ အတတျပညာတို့ကို သငျယူကွရမညျဖွဈ ကွောငျး၊ ကြှနျးပျေါရှိမွအေရငျးအမွဈမြားစှာရှိသဖွငျ့ ထိုအရငျးအမွဈမြားကို အသုံးခြ နိုငျသညျ့ အတတျပညာမြားကို သငျယူပွီး အရညျအသှေးကောငျးမှနျသညျ့ ထုတျကုနျ ပစ်စညျးမြားကို ထုတျလုပျနိုငျရမညျဖွဈကွောငျး၊ ထုတျကုနျမြား အရညျအသှေးကောငျးမှ သာလငျြ ဝယျလိုအားရှိမညျဖွဈပွီး ဝယျလိုအားရှိမှသာလငျြ ဝငျငှတေိုးတကျကာ ဒသေ သညျလညျး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာမညျဖွဈကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ ဈေးကှကျက လိုအပျသညျ့ အရညျအသှေးမွငျ့ ထုတျကုနျမြားကို ထုတျလုပျနိုငျရေး ပညာရေးကို ဦးစားပေးရမညျဖွဈ ကွောငျး၊ ယခုခတျေလူငယျမြားသညျ နောငျတဈခြိနျတှငျ တိုငျးပွညျကိုဦးဆောငျကွရ မညျ့သူမြားဖွဈသဖွငျ့ ကောငျးမှနျသညျ့လကျဆငျ့ကမျး အမှမြေားကို ပေးသှားရနျ မိမိတို့ တှငျ တာဝနျရှိမညျဖွဈကွောငျး၊ ကိုကိုးကြှနျးသညျလညျး တိုငျးပွညျ၏ အစိတျအပိုငျးဖွဈ သဖွငျ့ တပျမတျော၊ ဌာနဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပွညျသူလူထုပူးပေါငျးကာ ဒသေတိုးတကျရေးကို ဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈကွောငျး၊
ထိုသို့ ဆောငျရှကျနိုငျရေးအတှကျ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျရနျလညျး အဓိက အရေးကွီးပါကွောငျး၊ ကနျြးမာရေးပွညျ့စုံကောငျးမှနျခွငျး သညျ အကောငျးဆုံးဖွဈပွီး ကနျြးမာရေးမကောငျးပါက မိမိအပွငျ မိမိအားပွုစုစောငျ့ရှောကျရသူနှငျ့ မိမိအဖှဲ့အစညျး ၏ လုပျအားစှမျးရညျ ပါကဆြငျးစမေညျဖွဈကွောငျး၊ ယခုဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ့ (Covid-19) ရောဂါ ကာကှယျရေးလုပျငနျးမြားတှငျလညျး အသိတရားဖွငျ့ လုပျဆောငျကွရမညျ ဖွဈပွီး ကာကှယျခွငျးသညျသာလငျြအကောငျးဆုံးဖွဈပါကွောငျး၊
တပျမတျောအနဖွေငျ့ ဒသေခံမြား၏ နရေေး၊ စားရေး၊ သောကျရေး လုပျငနျးမြား တှငျ အဆငျပွစေရေေးအမွဲဆောငျရှကျပေးလကျြရှိပွီး ဒသေခံမြားအနဖွေငျ့လညျး တိုငျးပွညျဖှံ့ဖွိုးရေး၏ အခွခေံဖွဈသောစိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ အကြှမျးတဝငျ ဖွဈရနျလိုအပျပါကွောငျး၊ ထို့ပွငျ ကိုကိုးကြှနျးဒသေသညျ ဝေးလံပွီး ဆကျသှယျရေး၊ သှားလာရေး ခကျခဲသညျ့ဒသေဖွဈသဖွငျ့ တပျမတျောရယောဉျ၊ လယောဉျမြားဖွငျ့ အခကွေးငှမေယူဘဲ ပို့ဆောငျပေးလကျြရှိပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈမှ ၂၀၂၀ ခုနှဈအထိ လယောဉျ ဖွငျ့ ပို့ဆောငျပေးမှု ၁၇၆ ကွိမျရှိပွီဖွဈပွီး ဒသေခံ ၂၄၀၀ ကြျောကို ပို့ဆောငျပေးနိုငျခဲ့ ကွောငျး၊ သှားလာရေး နှငျ့ ပတျသကျ၍ စိတျအားမငယျရစရေနျ ဆောငျရှကျပေးထားခွငျး ဖွဈပါကွောငျး၊ ဒသေနှငျ့ ပတျသကျ၍ အိမျရာလိုအပျခကျြမြားရှိနသေညျဟု သိရှိရသညျ့ အတှကျ မွနေရောမြားကိုလညျး စီစဉျဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈပွီး ၆ ဧကကြျောတှငျ အိမျရာမြားအကှကျခြ၍ လိုအပျနသေူမြားကို နထေိုငျနိုငျရေးဆောငျရှကျပေးသှား မညျဖွဈကွောငျး၊ သကျဆိုငျရာဒသေအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့မြားက အမှနျတဈကယျ နထေိုငျရနျ လိုအပျနသေူမြားကို စိစဈပေးသှားရနျလိုအပျပွီး လုပျငနျးပွီးစီးမှုမြားကိုလညျး စိစဈ ဆောငျရှကျရမညျဖွဈကွောငျး၊ မွို့နှငျ့ တူအောငျ ဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈပွီး နအေိမျ ခွံစညျးရိုးနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြသနျ့ရှငျးသာယာလှပရေးကို နထေိုငျကွသူမြားက ဆောငျရှကျကွရနျလိုကွောငျး၊ သနျ့ရှငျးသာယာလှပရေးအတှကျ သကျဆိုငျသညျ့ စညျပငျသာယာရေးဝနျထမျးမြားက လုပျဆောငျနသေညျဆိုသျောလညျး အကုနျပွညျ့စုံ အောငျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျမဟုတျကွောငျး၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ကိုကိုးကြှနျး၏ အခွခေံအဆောကျအဦမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ဆောငျရှကျပေးနပွေီး နောငျတှငျလညျး ဆကျလကျဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကာ ၎င်းငျးအပျေါအခွပွေု၍ ဒသေတှငျး ခရီးသှား လုပျငနျးမြားမှသညျ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားလုပျငနျးမြားအထိ တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးလာစရေေး ဆောငျရှကျရမညျဖွဈကွောငျး၊ မိမိဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ဒသေတှငျ တာဝနျ ကသြူမြားနှငျ့ နထေိုငျသူမြားဖွဈသညျ့ တပျမတျော၊ ဌာနဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပွညျသူလူထုပူးပေါငျးပွီး ဒသေတိုးတကျရေးကို ဝိုငျးဝနျးပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွရမညျ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားသညျ။
၎င်းငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက စားသောကျဖှယျရာမြားနှငျ့ အသီးအရှကျမြိုးစမြေ့ားကိုလညျးကောငျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ)က စားသောကျဖှယျ ရာမြားကိုလညျးကောငျး၊ မွနျမာစီးပှားရေးကျောပိုရေးရှငျး ဥက်ကဌ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ညိုစောက Mectel ဖုနျးကဒျနှငျ့ငှဖွေညျ့ကဒျမြားကိုလညျးကောငျး၊ ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေးအတှကျ Jasmine Palace Construction Co.Ltd. မှ လှူဒါနျးသညျ့ ငှကေပျြသိနျး ၁၀၀၀ ကို ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူးက လညျးကောငျး အသီးသီးထောကျပံ့ ပေးအပျကွရာ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လကျခံရယူကွသညျ။
ယငျးနောကျ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးက ဒသေဆိုငျရာအခကျြအလကျမြားအား ရှငျးလငျးတငျပွပွီး မွို့မိ၊ မွို့ဖမြား၊ ဒသေခံမြားက ဒသေဆိုငျရာလိုအပျခကျြမြားရှငျးလငျး တငျပွရာ ယခုကဲ့သို့ ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားကို တပျမတျောမှ ကူညီဆောငျရှကျပေး ခဲ့သညျ့အတှကျ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ ယခုတှငျလညျး မွို့အတှကျ လိုအပျ နသေညျ့ အိမျကှကျမွနေရောမြားကို တပျမတျောပိုငျမွနေရော၌ နရောခထြားခှငျ့ပွုခွငျး အပျေါ ထပျမံကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျးဖွငျ့ ပွောကွားကွရာ ဒသေခံပွညျသူမြားနှငျ့ ဌာနဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြား၏ တငျပွခကျြမြားအပျေါ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျက လိုအပျသညျမြားဖွညျ့ဆညျး ဆောငျရှကျပေးပွီး တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တကျရောကျလာကွသူမြားအား ရငျးရငျးနှီးနှီးလိုကျလံ နှုတျဆကျသညျ။
ဆကျလကျပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ကြှနျးပတျ လမျးအတိုငျး မျောတျောယာဉျမြားဖွငျ့ လှညျ့လညျ၍ အိမျရာအခကျအခဲရှိနသေညျ့ ဒသေခံမြားအား နရောခထြားပေးမညျ့ မွနေရောကိုလညျးကောငျး၊ ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အခွအေနမြေားနှငျ့ ကာကှယျရေးဆိုငျရာလုပျငနျး ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမညျ့ အခွအေနမြေားကို လိုကျလံကွညျ့ရှုကွပွီး လိုအပျသညျမြား ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးမှာကွားခဲ့ သညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ နယျမွခေံ ရတေပျစခနျး အုနျးနှငျ့ အုနျးထှကျပစ်စညျးလုပျငနျးမှ အုနျးဆီ၊ အုနျးဆံကွိုး၊ အုနျး အလှဆငျ ပစ်စညျးနှငျ့ အိမျသုံးပစ်စညျးမြား ထုတျလုပျနမှေုမြားကို သှားရောကျကွညျ့ရှုကွရာ တာဝနျ ခံ မြားက လိုကျလံရှငျးလငျးပွသကွသညျ။ ရှငျးလငျးတငျပွမှုမြားအပျေါ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဆကျလကျ၍ အုနျးဆီ၊ အုနျးမီးသှေး၊ အုနျးခှံဓာတျမွသွေဇာ မြားအပွငျ အုနျးနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ အရညျအသှေးမွငျ့ထုတျကုနျမြား ဆကျလကျ ထုတျလုပျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားကို ပွနျလညျဆှေးနှေးပွောကွားခဲ့သညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ရှိ၊ နယ်မြေခံရေတပ်စခန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွန့်ဝင်းဆွေနှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ရှိ နယ်မြေခံရေတပ် စခန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား မြို့နယ်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား နယ်မြေခံရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ယင်းနောက် နယ်မြေခံရေတပ်စခန်း အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ရေတပ်စခန်းမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက နယ်မြေဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ နယ်မြေဒေသလုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများနှင့် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နေ ဒေသခံပြည်သူ များအား တပ်မတော်မှ လေယာဉ်၊ ရေယာဉ်များဖြင့် အပတ်စဉ်/လစဉ် အခမဲ့ပို့ဆောင် ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ တပ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် ထွက်ရှိလာသည့် အသားငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအား တပ်မိသားစုဝင်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချ ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ အုန်းနှင့် အုန်းထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ကိုကိုးကျွန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေ အနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ကိုကိုးကျွန်းဒေသသည် အလှမ်းကွာဝေးသောဒေသဖြစ်၍ စားသောက်ရေး၊ နေထိုင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ တပ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိ လာသည့် အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအား ဒေသခံပြည်သူများအား သက်သာသောဈေးဖြင့် ရောင်းချပေးပြီး သက်သာချောင်ချိရေးဆောင်ရွက်ပေးမှုများ အပြင် ဒေသခံများ၏ လူမှု စီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ကုန်များကို အထားခံသည့် ကုန်ခြောက် လုပ်ငန်းအဖြစ် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အုန်းနှင့် အုန်းထွက်ပစ္စည်းများကို ဒေသ၏ အဓိကထွက်ကုန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးပိုင်းတွင်လည်း ရှေ့တန်းကျကျ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် ရေတပ်စခန်းဖြစ်သဖြင့် ပြည်စုံ အောင်ဆောင်ရွက်ကြ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအားလုံး တစ်သားတည်းဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သွားလာရေးအဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်မြေခံ ရေတပ်စခန်းအတွင်း မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် လှည့်လည်၍ ကိုကိုးကျွန်း လေယာဉ်ကွင်း၊ လေယာဉ်ပြေးလမ်းတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်နေမှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား လိုက်လံ ကြည့်ရှုရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြသ ကြသည်။ ရှင်းလင်း တင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ် သည်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး မှာကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ကိုကိုးကျွန်း မြို့နယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား မြို့နယ်ခန်းမ ၌ တွေ့ဆုံ၍ စားသောက်ဖွယ်ရာပစ္စည်းများနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါ်မိုးမိုးအေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ထပ်မံတွေ့ဆုံရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းနှင့် ကိုကိုးကျွန်းသို့ မိမိရောက်ရှိသည်မှာ ယခုအကြိမ်သည် ၁၆ ကြိမ်မြောက် ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိကတည်းကပင် ကိုကိုးကျွန်းဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်၍ တိုးတက် စေရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီး တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ အပြင် မြို့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း တတ်အားသရွေ့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါ ကြောင်း၊ မြို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကိုလည်း တည်ဆောက် ပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိစဉ် က လေယာဉ်ပင်ခက်ခက်ခဲခဲ ဆင်းသက် ခဲ့ရပြီး ယခုအချိန်တွင် လေယာဉ်ကွင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခဲ့သဖြင့် ဂျက်လေယာဉ်များ ပင်ဆင်းသက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း။
ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိစဉ်က လေ့လာစဉ် အုန်းပင်အမြောက်အမြားရှိသဖြင့် အုန်းနှင့် အုန်းထွက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အုန်းထွက် ပစ္စည်းများကို ကိုကိုးကျွန်း၏ အဓိကထွက်ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိထုတ်လုပ်နေသည့် အုန်းဆီ၊ အုန်းဆံကြိုး၊ အုန်း အလှဆင်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုများအပြင် အုန်းမီးသွေး၊ အုန်းခွံဓာတ်မြေသြဇာ များကိုလည်း ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ အုန်းနှင့်အုန်းထွက် ပစ္စည်းစက်ရုံကိုလည်း ဒေသခံပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
လူတိုင်းကြီးပွားတိုးတက်လိုကြပြီး ထိုသို့ ကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည် လူသား စွမ်းရည်လည်း လိုအပ်သဖြင့် အတန်းပညာ၊ အတတ်ပညာတို့ကို သင်ယူကြရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကျွန်းပေါ်ရှိမြေအရင်းအမြစ်များစွာရှိသဖြင့် ထိုအရင်းအမြစ်များကို အသုံးချ နိုင်သည့် အတတ်ပညာများကို သင်ယူပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေးကောင်းမှ သာလျင် ဝယ်လိုအားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားရှိမှသာလျင် ဝင်ငွေတိုးတက်ကာ ဒေသ သည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်က လိုအပ်သည့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ပညာရေးကို ဦးစားပေးရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ယခုခေတ်လူငယ်များသည် နောင်တစ်ချိန်တွင် တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ကြရ မည့်သူများဖြစ်သဖြင့် ကောင်းမွန်သည့်လက်ဆင့်ကမ်း အမွေများကို ပေးသွားရန် မိမိတို့ တွင် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုကိုးကျွန်းသည်လည်း တိုင်းပြည်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ် သဖြင့် တပ်မတော်၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းကာ ဒေသတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်လည်း အဓိက အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးပြည့်စုံကောင်းမွန်ခြင်း သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက မိမိအပြင် မိမိအားပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူနှင့် မိမိအဖွဲ့အစည်း ၏ လုပ်အားစွမ်းရည် ပါကျဆင်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် (Covid-19) ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသိတရားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြရမည် ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ခြင်းသည်သာလျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း၊
တပ်မတော်အနေဖြင့် ဒေသခံများ၏ နေရေး၊ စားရေး၊ သောက်ရေး လုပ်ငန်းများ တွင် အဆင်ပြေစေရေးအမြဲဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ဒေသခံများအနေဖြင့်လည်း တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ အခြေခံဖြစ်သောစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ကိုကိုးကျွန်းဒေသသည် ဝေးလံပြီး ဆက်သွယ်ရေး၊ သွားလာရေး ခက်ခဲသည့်ဒေသဖြစ်သဖြင့် တပ်မတော်ရေယာဉ်၊ လေယာဉ်များဖြင့် အခကြေးငွေမယူဘဲ ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ လေယာဉ် ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမှု ၁၇၆ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ဒေသခံ ၂၄၀၀ ကျော်ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ ကြောင်း၊ သွားလာရေး နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားမငယ်ရစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒေသနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ရာလိုအပ်ချက်များရှိနေသည်ဟု သိရှိရသည့် အတွက် မြေနေရာများကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၆ ဧကကျော်တွင် အိမ်ရာများအကွက်ချ၍ လိုအပ်နေသူများကို နေထိုင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက အမှန်တစ်ကယ် နေထိုင်ရန် လိုအပ်နေသူများကို စိစစ်ပေးသွားရန်လိုအပ်ပြီး လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုများကိုလည်း စိစစ် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့နှင့် တူအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး နေအိမ် ခြံစည်းရိုးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးကို နေထိုင်ကြသူများက ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးအတွက် သက်ဆိုင်သည့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ထမ်းများက လုပ်ဆောင်နေသည်ဆိုသော်လည်း အကုန်ပြည့်စုံ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ကိုကိုးကျွန်း၏ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ ၎င်းအပေါ်အခြေပြု၍ ဒေသတွင်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းများမှသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအထိ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသတွင် တာဝန် ကျသူများနှင့် နေထိုင်သူများဖြစ်သည့် တပ်မတော်၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီး ဒေသတိုးတက်ရေးကို ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
၎င်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် အသီးအရွက်မျိုးစေ့များကိုလည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)က စားသောက်ဖွယ် ရာများကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း ဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစောက Mectel ဖုန်းကဒ်နှင့်ငွေဖြည့်ကဒ်များကိုလည်းကောင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် Jasmine Palace Construction Co.Ltd. မှ လှူဒါန်းသည့် ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ကို ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးက လည်းကောင်း အသီးသီးထောက်ပံ့ ပေးအပ်ကြရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြသည်။
ယင်းနောက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး မြို့မိ၊ မြို့ဖများ၊ ဒေသခံများက ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များရှင်းလင်း တင်ပြရာ ယခုကဲ့သို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တပ်မတော်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့သည့်အတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုတွင်လည်း မြို့အတွက် လိုအပ် နေသည့် အိမ်ကွက်မြေနေရာများကို တပ်မတော်ပိုင်မြေနေရာ၌ နေရာချထားခွင့်ပြုခြင်း အပေါ် ထပ်မံကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားကြရာ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏ တင်ပြချက်များအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က လိုအပ်သည်များဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးပြီး တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တက်ရောက်လာကြသူများအား ရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံ နှုတ်ဆက်သည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျွန်းပတ် လမ်းအတိုင်း မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် လှည့်လည်၍ အိမ်ရာအခက်အခဲရှိနေသည့် ဒေသခံများအား နေရာချထားပေးမည့် မြေနေရာကိုလည်းကောင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများကို လိုက်လံကြည့်ရှုကြပြီး လိုအပ်သည်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှာကြားခဲ့ သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်မြေခံ ရေတပ်စခန်း အုန်းနှင့် အုန်းထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းမှ အုန်းဆီ၊ အုန်းဆံကြိုး၊ အုန်း အလှဆင် ပစ္စည်းနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နေမှုများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြရာ တာဝန် ခံ များက လိုက်လံရှင်းလင်းပြသကြသည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဆက်လက်၍ အုန်းဆီ၊ အုန်းမီးသွေး၊ အုန်းခွံဓာတ်မြေသြဇာ များအပြင် အုန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ ဆက်လက် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။